3 su,aal jawaabtooda ka hor barashada shukaansiga gabdhaha
Ka hor inta aadan bilaabin barashada sukaansiga, sida gabdhaha jaceyl loogu abuuro, waxaa fiican inaad taqaano 3 su,aalood jawaabahooda.
Markaad fahanto seddexdaan ayaad u gudbi kartaa tilaabaha soo socdo:
Sida loola hadlo gabdhaha
Sida gabdhaha loo soo jiito
Sida gabdhaha jaceyl loogu abuuro
Noloshu waa sida tariin socdo oo kale oo aad adigu darawal ka tahay, adigaana dhankaad rabto u rogi karto laakin waa markaad taqaano sida loo wado. Sidaa si lamid ah ayeey gabdhuhuna u rabaan nin yaqaano sida loo hago. Dabcan ma jirto gabar jecel nin caqligiisa uusanba asiga ku filneyn inay nolosha la wadaagto.
Maxay ka rajeynayaan gabdhaha ninka?
Maxay jecelyihiin gabdhaha?
Waa kee ninka ay gabdhaha ay ku riyoonayaan?
Gabdhaha waxa ay rabaan nin yaqaano sida badda looga soo dabaasho laakin ma rabaan nin aanba asigaba dabaalan Karin. Maxaa ula jeedaa taas? Marka aan badda tusaale u soo qaadanayo macnaheedu waxa ay tahay: Jaceylku waa sida adigoo badweynta dhex joogo haddii aadan aqoonin sida looga soo dabaasho waxaa qatar gelayo noloshaada, marka sidee gabadha nolosheyda ugu aamini kartaa nin aanba noloshiisa maareyn karin?
Jawaabta: inaan halkaan ku qoro uma baahno sababtoo ah adiguba waad fahmeysaa waxaan ula jeedo. Sida ragga ay u jecelyihiin inay guursadaan gabdhaha firfircoon ee wax walbaa ku wanaagsan, ayeey gabdhuhuna u jecelyihiin ninka aktive ah oo ragga wax badan dheer.
Sidoo kale markaad rabto inaad kaluun soo dabato waxaad u baahantahay marka hore inaad taqaano sida loo dabaasho, kadibna doon iyo maqaalin aad wax dabow ku barato. Marka ugu horeyso suurto gal ma ahan inaad horay wax ka soo qabato laakin markaad dhowr jeer ku celceliso oo aadan ka niyad jabin ugu dambeyn waad ku guuleysaneysaa. Aan ka gudubno qoraal ahaan oo aan u sameyno ficil ahaan.
1. Maxay jecelyihiin gabdhaha?
Gabar walbaa waxa ay jeceshahay ka hor safarka dheer ee nolosha in ay xariir la sameyso ninka nuucaan si ay nafteeda ugu hibeyso haba ku kala duwanaadaan gabdhaha dhanka dooqqa. Haddii aad kamid noqoto shantaasi nin waxaa tahay nin nasiib leh. Hambalyo!
Ninka ugu hantida badan
Ninka ugu quruxda badan ee isha qabaneyso
Ninka ugu xaragada badan (Mr showiste)
Nin Sixback leh oo jirkiisu macaan yahay
Ninka isku kalsoon misana yaqaano sida gabdhaha loo soo jiito
Markaad hanti leedahay waxaa indho sarcaad ku rideysaa gabdhaha badankood sida Xaliimo lacag, Jamaad jalaqsan iyo Faadumo ku qabso ku qadi meysidee. Laakin iska ilow Farxiyo jaceyl lagu dhalay misana jaceylka wax ka taqaano. Taasi lacag kastaa oo aad leedaahy lagama yaabo inay kugu raacdo maxaa yeelay nin lacag leh waxa uga qiimo badan nin iska faqiir ah oo qalbigeeda kasbado. Ha is dhihin waxaa tahay in lacag leh waxaad guursan kartaa gabar walbaaa.
Gabdhaha waxa ugu horeyo ee ninka ka fiiriyaan waa quruxdiisa, haddii aad tahay nin Ilaahey u dhaliyay qurux iyo joog, of course gabdho fara badan ayaa saf kuu soo galayo, Alla ninkaan qurux badanaaa oo macaan badanaa, yaa mar lee ninkaaga ka dhigo ayeey mid walbaa isdhaheysaa.
Dabcan ma jirto gabar rabto nin aanan isagaba istaag taageynin